musha » DMCA
Sactivator.com ari zvaidiwa 17 U.S.C. § 512 uye Digital Millennium Copyright Act ("DMCA"). Zviri Mutemo wedu kupindura chero kukanganisa anocherechedza uye tora zviito zvakakodzera pasi Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") uye nezvimwe mitemo zvinoshanda zvedzidzo pfuma.
Kana mashoko ako copyrighted rave Posted on sactivator.com kana kudyidzana yako copyrighted zvenyama vakadzoka kuburikidza yedu kutsvaka injini uye uchida mashoko aya kubviswa, unofanira kupa kukurukurirana rakanyorwa kuti vaiudzwa mashoko akanyorwa anotevera chikamu. Tapota ziva kuti iwe achava akafanirwa nokuda kunokanganisa (kusanganisira mari uye magweta 'mari) kana iwe zvisizvo mashoko dziri nzvimbo yedu kuti infringing pamusoro Copyrights dzako.
We anoratidza kuti imi kutanga zivisai Gweta rubatsiro pamutemo nezvenyaya iyi.
Anotevera zvinhu zvinofanira kubatanidzwawo Copyright yenyu kukanganisa kutaura:
Zvinopa uchapupu mvumo munhu kuita vachimiririra muridzi ane zvakakwana kodzero kuti achifungidzirwa kuvhiringidzwa.
Muzvitsaurirei zvakakwana kane mashoko kuitira kuti kutaura iwe.
Unofanirawo kusanganisira musoro kero ye email.
Unofanira kuziva yakakwana muudzame copyrighted basa aizviti kunge kuvhiringidzwa uye kusanganisira kanenge imwe kutsvaka izwi pasi izvo zvinhu zvinooneka sactivator.com zvawanikwa kutsvaka.
A okuti pakunyunyuta bato rine yakanaka kutenda kudavira kuti kushandisa mashoko nenzira chema haina mvumo nomuridzi Copyright, ayo muiti, kana murayiro.
A okuti mashoko ari ziviso yakarurama, uye achitogona nhema, kuti pakunyunyuta bato anobvumidzwa kuita nokuda muridzi ane zvakakwana kodzero kuti achifungidzirwa kuvhiringidzwa.
Inofanira akasaina kubudikidza mvumo munhu kuita vachimiririra muridzi ane zvakakwana kodzero kuti zvichipomerwa kuitwa kuvhiringidzwa.
Tumirai kukanganisa chiziviso!
Zita rako (kunodiwa)
misa nomubvunzo unogombedzera kunyunyuta kwako kune mamwe mapato akadai yedu Internet Service Provider haangavi expedite chikumbiro chako uye zvingaita kuti pave nekunonoka kufarira rwakafanira kunyunyuta kwete zvakanaka kuitwa kudare.
Iva Nechokwadi DMCA Asati
TOTAL makatsemuka DOWNLOAD
Malwarebytes Anti-Malware 3.3.1.2183 mutswe
FL Studio 12.5.1.165 mutswe
WiFi Password Hacker 2018 - Wi-Fi Password kugura Chishandiswa
Adobe Acrobat Pro DC mutswe 2018
KMSpico 11 Final 2018 Portable Windows uye Office Activator
Gmail Hack Danho 15.4.1 - 100% Easy kugura mu 2 maminitsi 2018 [tsva]
NordVpn 6.50 Pro mutswe + chigamba pamwe 2018 Premium Accounts / Serial Keys
Lumion 8 Gadzirira + Full Version mutswe 2018 Free Download [tsva]
Site Kunotangwa By Subway surfers Hack